Nnukwu ego: TinderBox | Martech Zone
Thursday, June 23, 2011 Mọnde, Febụwarị 4, 2013 Douglas Karr
Ihe dịka otu izu gara aga DK New Media gbakwunyere TinderBox, a Ngwọta Management Ngwọta, na ndepụta ya nke ndị ahịa na-eto eto. Edere m banyere TinderBox mgbe ha bidoro… na mgbe anyị ghọrọ ndị ahịa nke ha. Anyị nwere obi ụtọ banyere inyere ibe anyị aka n'ihi nnukwu ihe ngwọta ha nwere.
The TinderBox ngwa dị egwu ma chekwaa m ọtụtụ awa na oge elekere. Ebum n'uche m, mepụtara ebe nchekwa ọdịnaya yana ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye. Dị ka atụmanya na-arịọ a amaghị, ọ bụla nke anyị otu nwere ike na-aga na jidere na ngalaba anyị chọrọ, bipụtara ha amaghị, na-eche maka ngosi na atụmanya elelewo ya, zaa ajụjụ ọ bụla… ma nweta nnabata. Obi abụọ adịghị m na sọftụwia ahụ n'onwe ya nyere aka mechie ụfọdụ azụmahịa.
TinderBox na-enye ndị ọrụ ohere ijikwa akụkụ niile nke ihe okike gụnyere: ederede, nhazi, njikwa, nkwenye, na nsuso site na otu interface dị mfe. Ndị otu buru ibu nwere ike ijikọ TinderBox na enweghị nsogbu n'ime usoro CRM dị ka Salesforce.com, na-eme ka ọrụ ndị otu ha na-arụ ọrụ na ibelata oge ha iji mechie azụmahịa ọhụrụ. TinderBox nwere ndị ahịa ugbu a na mba 7, na-akwado amụma na akwụkwọ na asụsụ 4.
Taa, anyị nwere obi ụtọ ịnụ na e nyegoro TinderBox ego HALO, mpaghara ebumnuche itinye ego na ụlọ ọrụ aka ọrụ nwere nnukwu ọrụ. HALO pụtara Hoosier Angels Na-achọ Ohere. Teknụzụ jikwaa otu ndị na-etinye ego HALO. Ntinye ego a na-eweta ego HALO zuru oke na ụlọ ọrụ Indiana na $ 17.1 na ọnwa 36 gara aga.
TinderBox bụ ihe ọzọ na ụlọ ọrụ ndị Indiana na-etolite etolite nke rụpụtara ihe ndị bara uru na njikwa ahịa na oghere ahịa tụrụ. Mark Hill, onye otu HALO na onye isi oche nke ndị isi ụlọ ọrụ TechPoint.
Companylọ ọrụ ahụ gara n'ihu ịgbakwunye atụmatụ na arụmọrụ na - enweghị atụ - gụnyere ihe ngosi SMS, Nzube Ntuziaka, Usoro Ntuziaka (dị na nwelite anyị na nso nso a… na ihe anyị ga - eji mee ihe), yana isiokwu zuru oke. Ihe anyi choro bu ihe di egwu ma anyi puru itinye vidiyo na ha:
Nke a bụ vidiyo mmeghe. Jide n'aka na ị gara ma banye maka a ikpe n'efu!
Tags: online amaghị na softwareamaghịamaghị softwarenkwanye ahịaahịa amaghị softwareigbe igbe
Agụla m ntakịrị banyere TinderBox, mana ọ dị mma ịhụ ka ọ na-eto ma na-emeziwanye. Ugbu a ọ bụrụ naanị TinderBox nwere ike ịchọta ihe ngwọta maka RFP na-atụ ụjọ.
Ha nwere usoro nchekwa dị mma maka nchọta na ịchekwa ọdịnaya. Echere m na sistemụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka RFPs… mana ị ga-eji akaụntụ Pro wee nweta ya niile.
Daalụ maka nkwado dị mma Doug - anyị nwere obi ụtọ ịbụ ndị ahịa DK New Media!